Global Voices teny Malagasy » Isa-minitra Marary Enina No Voatily Fa Tratry Ny Homa-miadana Any Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Isa-minitra Marary Enina No Voatily Fa Tratry Ny Homa-miadana Any Shina
Voadika ny 17 Avrily 2013 4:35 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Efa ofisialy. Ivon'ny olana amin'ny fahasalamam-bahoaka any Shina ny homamiadana.
Enina isa-minitra ireo marary voatily fa tratry ny homamiadana, marary 8.550 vaovao tratry ny homamiadana isanandro izany, araka ny fanisana mikasika homamiadana  tamin'ny taona 2012 (2012中国肿瘤登记年报) [zh]. Voalazan'ny tatitra fa ny 13 isan-jaton'ny mararin'ny homamiadana no ho faty.
Maro no mino fa ny maha-haingana ny fitombon'ny salan'isan'ny mararin'ny homamiadana dia vokatry ny fahalotoan'ny tontolo iainana  nanomboka ny folo taona farany nampiroborobo fatratra an'i Shina.
Navoaka tamin'ny janoary 2013 ny tatitra mikasika ny fanisana ny mararin'ny homamiadana, saingy tsy dia noresahana firy. Sahirana nifantoka tamin'ny Fihaonambem-Pirenen'ny Mponina  (NPC) sy ny Fanaovana Fakàn-kevitra Politika tamin'ny Vahoaka Shinoa  (CPPCC) ny mpilaza vaovao Shinoa.
Ny 7 sy 8 Aprily, na izany aza, navaozin'ireo mpilaza vaovao isan-karazany ho toy ny olan'ny fahasalamam-bahoaka  ilay tatitra [zh], niteraka adihevitra mafy ary matetika tora-pò avy amin'ireo sehatra media sosialy tena malaza ao Shina.
Ny mpanadihady iray antsoina hoe Tulao 8  (@土魯8) [zh], avy any Guangzhou, dia niteny tao amin'ny Sina Weibo hoe :
Firenen'ny homamiadana i Shina. Isa-minitra olona enina no voatily fa tratry ny homamiadana. Tarehimarika mampihoron-koditra izany. Izany no vokatra azon'ireo vahoaka madinika sitrahana 30 taona taty aorian'ny drafitra politika misokatra sy ny fanavaozana. Ny sasany amin'ny vahoaka faly mikasika izany toe-javatra izany ary fahatanterahan'ny tanjony no ijereny ny zavatra rehetra. Ny sasany miady mafy amin'ny fahafatesana ary tsy fantany akory iza no mpamono. Ny sasany mba mahafantatra izay nanao izany taminy ihany saingy tsy afaka manao n'inona n'inona hanakanana ny vatany tsy ho rotehan'ny loto.
Sarintany maneho ny tanàna misy ny homamiadana
Ny tompon'andraikitry ny tontolo iainana any Shina dia efa nanamafy ny fisian'ny antsoina hoe “tanànan'ny homamiadana”  [zh], miaraka aminà vokatra ara-tsimika 3000 mahafaty voamarina ary hita manerana an'i Shina (tsy ao anatin'izany ny angona avy any amin'ny faritra mahaleotena toa an'i Tibet, Xinjiang ary Oinghai.)
Ny filazam-baovao Shinoa dia nitatitra fa farafahakeliny 459 ny tananan'ny homamiadana . Mahalana no ahitana 10 isan-jaton'ny trangana homamiadana fotsiny ao amin'ireo tanàna  ireo. Ny ratsy indrindra amin'izany dia ny tanànan'i Zhai Wan Cun any amin'ny faritr'i Hubei ; any ny salan'isan'ny homamiadana dia 80 avo heny amin'ny an'ny firenena manontolo  [zh]. Tanàna misy mponina 3000 monja, nefa maherin'ny 100 ny mponina voan'ny homamiadana tao no maty tany tamin'ny taona 2003-2006. Ny salan'isan'ny mararin'ny homamiadana any amin'ny firenena mandroso dia manodidina ny 3 isan-jato .
Ankoatr'ireo antontan'isa mampieritreritra ireo, mpiblaogy madinika maro no nanaingo ny tena zava-misy marina any amin'ireo vondrom-piarahamonina misy azy ravan'ny homamiadana.
Mpiblaogy iray milaza ny tenany ho “Tsara kokoa ny mahantra ao an-trano” (@在家貧亦好) ao amin'ny Sina Weibo [zh] no namaritra  fa :
Nitsidika ny tanànan'ny fahazazako aho nandritra ny fety ara-kolotsaina tany Qingming , misy maro mararin'ny homamiadana ireo tanàna roa mifanakaiky ary maro no maty vokatr'izany. Ilay tanàna voalohany dia nisy 5 ary ilay iray hafa nisy 6. Betsaka tamin'izy ireo no teo anelanelan'ny 30-50 taona, somary betsaka izany. Ailiky ny mponina any amin'ny haratsiam-bintana ny resaka, nefa tsy maintsy efa nisy zavatra tsy nanjary nitranga tany ho an'ireo tranga marobe teny amin'ireo tanàna ambanivohitra. Tokony hanadihady ilay tranga misy ny tompon'andraikitra.
Iray hafa milaza ny tenany ho “Ravina mena eny antendrombohitra” (@山山紅葉 ), avy ao Tai An ao amin'ny faritanin'i Shandong, nilaza hoe :
Voahodidinin'ny orin'asa maro ny tanànanay ao Tai'an. Tsy maintsy nifindra toerana ny tanànay noho ny fanorenana orinasa mpitrandraka aliminioma teo. Nanandrana nanangona sonia ry zareo saingy voasakana. Voaporitry ny governemanta ofisialy ireo mpilaza vaovao amin'ny fahitalavitra. Tsy mety hamokarana intsony ny taninay ka dia ampanofaina amin'ireo orinasa sisa. Mitosaka be toy ny rano vaky ny isan'ny mararin'ny homamiadana.
Deng Fei (@鄧飛), mpikatroka iray mafàna fo izay miady amin'ny fahalotoan'ny rano fisotro any Shina amin'ny fanentanana ireo mponina mba hamorona antontan-taratasy mikasika ny renirano voaloto, dia namoaka indray  [zh] hafatra manokana iray nalefa taminy avy aminà namana iray mpiserasera :
#Taratasinà namana iray mpisera ety anaty aterineto # Ry Deng mpampianatra, nirotsaka ny ranomasoko raha vao nahita anao nanasongadina ny ahiahy mikasika ny fahalotoan'ny rano any ambanin'ny tany. Nandao ny tanànan'ny fahazazako ho any Shangai aho fony mbola tena tanora, saingy ny fianakaviako mbola monina any akaikin'i Weifang sy Pingdu faritanin'i Shandong. Ankehitriny, ny fianakaviana tsirairay dia afaka mitantara momba ny homamiadana avokoa. Ny rafozan'ny anabaviko mianatra lalàna dia samy voatily tamin'ny taona lasa hoe voan'ny homamiadana. Ankehitriny, ny rafozan-dahiny dia efa maty fa ny rafozam-baviny kosa mbola manaraka fitsaboana. Te hisaotra anao aho noho ireo vitanao ho an'ireo mponina ao amin'io tanàna kely io.
Ny faripiadidian'i Cang any Hebei no ohatra iray amin'ireo faritra manana salan'isa avo indrindra mikasika ny homamiadana, ary tany aloha tany dia nizaka ny taha avo indrindra mikasika ny fahalotoan'ny rano ambanin'ny tany. Charles Xue (@薛蛮子), mpampiasa vola no nanasongadina  [zh] ilay vaovao hoe :
#Tsikera mikasika ny raharaha fahalotoan'ny “tsaramaso mena” tao amin'ny faripiadidian'i Cang ao Hebei# [naoty : nivadika mena ny rano ambanin'ny tany tao amin'ny faritra ary nanamafy ny lehiben'ny departemanta misahana ny tontolo iainana fa tsy voaloto ny rano, nolazainy fa rehefa nahandroina miaraka ny tsaramaso mena sy ny vary dia mivadika ho mena ny vary.] Vokatry ny tsikeran'ny mpiserasera dia voaroaka ilay lehiben'ny Departementa misahana ny Tontolo Iainana any amin'ny fari-piadidian'i Cang nony farany. Nivoaka ny tatitra ary nahatratra avo 70 henin'ny tokony ho izy ny fako simika. Tao an-tanana, nisy marary 30 voatily fa tratry ny homamiadana ka ny 26 tamin'ireo maty. Nanohitra ny mponina saingy nandritra ireny taona ireny, nilaza ve ny tatitra rehetra avy ao amin'ny fari-piadidiana ho an'ny departemantan'ny tontolo iainana ao amin'ilay faritany fa tsy misy atahorana ny kalitaon'ny rano?! Ahoana no fomba hitsapan-dry zareo ny kalitaon'ny rano isan-taona ? Amin'ny tanàna 655 any Shina, 400 no miankina amin'ny famatsiana rano avy any ambanin'ny tany, noho izany inona no ataontsika ? Inona no azon'ireo zanatsika atao ?
Mpanadihady iray antsoina hoe “Dadada Kely” (@小达达哒) no niblaogy mikasika [zh] ny tahan'ny fahafatesana noho ny homamiadana ao amin'ny tanànan'i Fuzhou any amin'ny faritanin'i Fujian
[Homamiadana mpamono olona sy zioga mavesatry ny tanàna Fuzhou] Ny tanànan'i Fuzhou no manome ny 19.3% n'ny mponina ao amin'ny faritanin'i Fujian, ary ny isan'ny matin'ny homamiadana isan-taona dia mihoatra ny 11.000. Ny tahan'ny matin'ny homamiadana dia nihoatra ireo tanàna salantsalany sy madinika eto amin'ny firenena.
Ny mpampiasa antsoina hoe “Huihui Da” （＠回回達）namintina  [zh] tamin'ny filazàna tamim-panesoana hoe :
, eat poisonous bread, toxic sprouts produced by industrial farming, breathe in toxic smog. Of course we have cancer…………………………………………. Tsara, misotro lasopin-kisoa izahay [entiny milaza ireo fatin-kisoa hita tao amin'ny reniranon'i Shanghai], mihinana mofo voapoizina, masomboly mahafaty vokarin'ny orinasa momba ny fambolena, mifoka setroka maloto mahafaty. Mazava ho azy, tratry ny homamiadana izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/17/47641/
 fanisana mikasika homamiadana: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b7683ce0102eh0k.html
 fitombon'ny salan'isan'ny mararin'ny homamiadana dia vokatry ny fahalotoan'ny tontolo iainana: https://globalvoicesonline.org/2013/02/25/chinese-billionaire-pollution-steering-china-toward-cancer-crisis/
 ihaonambem-Pirenen'ny Mponina: http://en.wikipedia.org/wiki/National_People%27s_Congress
 Fanaovana Fakàn-kevitra Politika tamin'ny Vahoaka Shinoa: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_People%27s_Political_Consultative_Conference
 ho toy ny olan'ny fahasalamam-bahoaka: http://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/html/2013-04/08/content_1470498.htm?jdfwkey=f5wco3
 Tulao 8: http://weibo.com/1890673454/zr5TJyjFr
 nanamafy ny fisian'ny antsoina hoe “tanànan'ny homamiadana”: http://www.nownews.com/2013/02/24/11490-2906194.htm
 459 ny tananan'ny homamiadana: http://www.tealeafnation.com/2012/09/the-horrific-cost-of-chinas-breakneck-development-cancer-villages
 80 avo heny amin'ny an'ny firenena manontolo: http://www.epochtimes.com/b5/7/1/14/n1589918.htm
 3 isan-jato: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/24/worldwide-cancer-rates-uk-rate-drops
 fety ara-kolotsaina tany Qingming: http://en.wikipedia.org/wiki/Qingming_Festival
 dia namoaka indray: http://weibo.com/1642326133/ziWPtpokT
 no nanasongadina: http://weibo.com/1813080181/zr9LoosC7
 niblaogy mikasika : http://weibo.com/2836625202/zrbGLywoU